टेक अफ योर अन्डरवेयर - Nepali Sex Tube
Nepali Sex Tube
टेक अफ योर अन्डरवेयर
पोखरामा केही हप्ताको काम थियो। काठमाडौंबाट हिड्दा पोखरामा बस्ने एक जना चिनजानका दाइसंग बास मागे। बसपार्कसम्म लिन आए अनि उनको घर पुगियो। चिटिक्क परेको घरमा पसियो। घरमा भाउजु थिइन। मोडलजस्ती रहेछिन्। ठिक्ककी मोटी, हंसिली, गोरी अनि अति सेक्सी। उनका ठिक्कका स्तन टाइट टिसर्टबाट पुष्ट देखिएका थिए। खैरो हलुका सुरुवाल लगाएकी थिइन। उनका हत्केला अनि खुट्टाका औला यस्ता सर्लक्क मिलेका थिए, हेर्दै चुसौ चुसौ लाग्ने थियो।
बेलुकी खानाखाने बेला माथीबाट एउटी युवती झरी। हेर्दा निकै कलिली थिइ। ठ्याक्कै ती भाउजु जस्तै। उनकै छोरी हुन भनी अनुमान लगाउन केही बेर लागेन। उस्तै चाल, उस्तै कसिलो ज्यान। गोरी, बाटुली साह्रै हिस्सी परेकी थिइ। चञ्चले देखिन्थी अनि खुबै नक्कली होली जस्ती थिइ। समिज जस्तो पातलो कालो टिसर्ट लगाएकी थिइ। उसका भर्खर विकास हुँदै गरेका स्तनले छातिमा बनाएको खाल्डोले आकर्षित गर्थ्यो। उ मेरो साइडबाट सुट्ट कटी। वाह ! उसको शरिरबाट आएको बासनाले एकछिन मुग्ध भए। कुर्सीमा बसिराखेको मेरो लिङ्ग एकाएक ठिङ्ग भयो। उ टेबुलको अर्को साइडमा रहेको ठ्याक्कै मेरो अगाडी रहेको कुर्सीमा बसी। हामी खाना खान थाल्यौं।
उ एसईई दिएर बसेकी थिइ। साइन्स पढ्ने विचार रहेछ। काठमाडौं जाने योजना रहेछ। उसको नाम माधुरी रहेछ।
दिन बित्दै गए। दिउँसो फिल्ड जानुपर्थ्यो। ती दाइ र भाउजु अफिस जान्थे। माधुरी घरमै हुन्थी। ४ हप्ताको काम छिट्टै सकिने भएको थियो।
दिन बित्दै जाँदा माधुरी नजिकिदै गएकी थिइ। उ मेरो कोठामा आउँथी अनि आफ्ना स्कुलका साथीहरुको बारेमा कुरा सुनाउँथी, साइन्स विषयको बारे सोध्थी। काठमाडौं गएपछि यस्तो गर्छु, उस्तो गर्छु, यहाँ घुम्छु, अनेक कुरा गर्थी। म उसका कुरा एकटकले सुन्थे। उसका हाउभाउमा ध्यान दिन्थे। उसका ओठको चालमा मस्त हुन्थे। उ नजिकै बस्दा उसको कलिलो शरिर जवानीमा टेक्दै गर्दा निस्किएको बासनाले उत्तेजित हुन्थे।
त्यो दिन काम खासै नभएकाले घरमा खाटमा पल्टिएको थिए। माधुरी मन्द चालमा मेरो कोठामा आइ। अनि खाटको छेउमा बसी।
‘माधुरी!”हजुर।”तिमी सधै यस्तै राम्री थियौ?”अँ, तपाइ पनि।’ उ लजाइ। अनि अनुहारमा लट्किएका कपाल हत्केलाले कान पछाडी लगी।’साँच्ची भनेको।”म राम्री छु र ?’ उसले लजाउँदै प्रतिप्रश्न गरी।’छौ नि। तिम्रो आँखा मलाई कस्तो मनपर्छ। अनि तिम्रो हत्केला पनि।”अबुई तपाई त ! कस्तोकस्तो कुरा याद गर्नु भ’को हो के !”हो त के । तिम्रो राम्री छौ र त भनेको ।”अँ होला’, उ फेरि लजाइ।उसका स्लिभलेस टिसर्ट भित्रबाट स्तनको पुट्ट निस्किएको दृश्यले मन एकतमासको हुन थाल्यो।’तिमीले आज गाजल किन नलाएकी?”घर बस्दा पनि कसले गाजल लगाउँछ के ?’उसले अलि चर्को स्वरमा जवाफ फर्काइ।’त्यही भएर लिपिस्टिक पनि नलाएकी ?’मैले उसको साँप्रामा स्पर्श गर्दै भने। उसले मतिर घुरेर हेरी अनि लजाइ।’तपाई पनि के के भन्नुहुन्छ के के!”साच्ची भनेको जाउ न लगाएक आउ, कस्तो क्युट देखिन्छौ।’ फकाउने स्वरमा उसलाई भने।’कतै जानु त छैन, किन
लगाउनेबेक्कारमा।”जाउ न के ल्याउ न, बरु म लगाइदिन्छु नि, फोटो खिचेर हेरम त तिमी कति राम्रो देखिदो रहेछौ।’उसले म तिर हेरेर टोलाइ। मखाटबाट जरुक्क उठे। अनि उसको पेटमा काउकुती लगाए।उ छटपटिदै जोड जोडले हाँसी।’ ल के, म ल्याउँछु, पर्खनु एकछिन।’उ गुरुर्र दगुरेर गइ। मेरो लिङ्ग ठिङ्ग भएर पानी झरिसकेको रहेछ।केही बेरमा उ मुस्काउँदै कोठामा छिरी। उसको हातमा लिपिस्टिकको बट्टा थियो। उ खाटको अगाडी आएरठिङ्ग उभिइ। उसको हात समातेर भने, ‘खै देउ मलाई, तिमी यहाँ बस। म लगाइदिन्छु।”भो, म आफै लगाउछु।”पहिले बस न’उ खाटमा थ्याच्च बसी। उसको हातबाट लिपिस्टिकको बट्टा झट्ट ताने। उ ठुस्केको जस्तो गरी।’म तिर फर्क न’उ पलेटी मारेर बसेकी थिइ। म तर्फ फर्कि। म उसको नजिक सरे। हामी दुवै आपसमा निकै नजिक थियौ। उसको बास्ना हरर आउँदै थियो। मैले उसको ओठमा स्पर्श गरे। उ लजाइ। अनि टाउको झुकाइ। उसको टाउकोलाई दुवै हातले समातेर माथी उठाए। उ लाजले रातो भएकी थिइ।’किन लजाएकी?’,
उसको दुवै गालामा हत्केलाले समातेर टाउको मतर्फ सोझ्याउँदै सोधे।’उ मुसुक्क हाँसी मात्र।’कति सफ्ट तिम्रो ओठ।’उसले आँखा चिम्म गरी।लिपिस्टिक बटारे। रातो लिपिस्टिक उसको ओठमा दल्न थाले। उ असजिलो मान्दै थिए। बेला बेला मतर्फ हेर्थी । मसंग आंखा जुद्थ्यो अनि आँखा तल झुकाउँथी। मैले निकै समय लिए। उ शान्त भएर बसी। लिपिस्टिक लगाउन बिगार्थे अनि चोर औलाले पुछिदिन्थे। जिस्किदा जिस्किदै उ मेरो चोर औला दाँतले बिस्तारै टोक्थी अनि मन्द मुस्काउँथी। उसका ओठ लिपिस्किटले रातो थियो, उसको आँखा र गाला त्यस्तै रातो थियो। उ लठ्ठ भएकी थिइ।’यु आर लुकिङ सेक्सी ।’यो पटक उ निकै लजाइ। टाउको पुरै झुकाइ। उसका दुवै हत्केला समाते। अनि बिस्तारैऔलाहरु मुसार्न थाले। उ बिस्तारै उत्तेजित हुदै थिइ।फोटो खिचम है अब।”ओके’मोबाइल निकालेर उसको फोटो खिचे। उसका खुट्टा खाटमा लमतन्न तन्किएका थिए। एउटा हात खाट अड्याएकी थिइ। उ फोटो हेर्न मसंगै टाँसिएर बस्न आइपुगी। उसले मसंग सहज महसुस गर्न थालेकी थिइ।फोटो हेरेपछिमतर्फ पुलुक्क हेरी ।’तिमी त मोडल जस्ती देखियौ, हेर त।’मैले उसको गाला चिमोट्दै भने।उ प्रफुल्लित मुद्रामा फोटो हेर्न थाली।’ल तिम्रो आज फोटो सुट गर्ने, ड्रेसअप राम्रो गरेर।’, मैले अफिसको ब्यागबाट डिएसएलआर क्यामेरा र लेन्स लिकाले।’साच्चीँ’, उ खुसी भइ।तर लुगा चेन्ज गरेर झन्राम्रो भएर आउ ।’कस्तो लगाउने, मलाई छान्न आउँदैन।”लु हिडँ, लुगा म छानिदिउँला।’उ आफ्नो कोठा तिर लम्की। म उसका लच्किएका पुठ्ठो हेर्दै उसको पछि पछि लागे।
उसको कोठा निकै सजिएको थियो। कोठाको एक कुना किताबको र्याक, अर्को साइडमा कम्प्युटर टेबल अनि ढोकाको छेउमा ठूलो ऐना अगाडी उसका मेकअपका सामान मिलाएर राखेकी थिइ।संगै जोडिएको अर्को सानो रुममा उ पसि। त्यहाँ उसको लुगाको दराज थियो। अनि अर्को ठूलो ऐना।उ लुगाका पत्रहरु केलाउन थाली। मैले रातो वानपिस छाने।’एक छिन है।’, उसले मलाई धकालेर अर्को रुमा पुर्याइ।एकैछिनमा उ वानपिसमा सजिएर लजाउँदै बाहिर आइ। वान पिसमा उ अग्ली देखिन्थी। ‘कस्तो देखियो?”पर्फेक्ट।’उ मेरो नजिक आइ। वानपिसमा उसको फिगर निकै सेक्सी देखिन्थ्यो। उसको कपालको काँटा निकाले, अनि खुलेको कपाल दुवै साइडबाट अगाडी झारे। उसको फोटो खिच्न थाले। केही बेरमा फेरी अर्को लुगा छान्थे अनि उ त्यसमा सजिएर फोटो खिच्न आइपुग्थी। ४-५ वटा फोटो सेसन पछि मैले केवल एउटा कालो समिज र सानो मिनिस्कर्ट छाने। एकैछिनमा उ त्यही लुगामा बाहिर आइ, अर्धनग्न। उसका सेता साँप्रा सलक्क थिए, चिल्ला अनि पुष्टिएका। समिजले उसको आधा जिउ पनि ढाकेको थिइन, उसको स्तनको क्लिभेज स्पष्ट देखिन्थ्यो।उसले पोज दिन थाली। उ पहिले भन्दा लजाएकी थिइ त्यसैले उ सेक्सी देखिन्थी। फोटो निकै कामुक क्याप्चर हुँदै थियो।
उसमा बिस्तारैकन्फिडेन्ट आउँदै थियो।’माधुरी, टेक अफ योर ब्रा’उ लाजले भुतुक्कै भई। म उ तर्फ बढे। उसको कपाल मिलाए। उ चुपचाप अगाडी हेरेर बसेकी थिइ। उसका पाखुरा देखि काँधसम्म नग्न छाला स्पर्श गर्दै उसको पछाडी पुगे। उसको ढाडमा हात राख्दा उ झस्की।’डन्ट वरी।’ उसको कान नजिक पुगेर साउती मारे। ढाड हुँदै समिज भित्र हात हालेर उसको ब्राको हुक खोलिदिएँ। अनि बिस्तारै एक साइडबाट समातेर ब्रा पछाडी ताने। उ निरन्तर अगाडी नै हेर्दै थिइ। उसको पालतो ब्राबाट मिठो सुगन्ध आयो। ब्रालाई टेबुलमा राखे।
‘गिभ मि ए सेक्सी पोज’, उसको कानमा साउती मारेर म क्यामेरा तर्फ बढे। उसले कम्मर मर्काउन थाली। केही सट लिएपछि उसलाई थोरै अगाडी झुक्न भने ताकि उसको क्लिभेज र स्तनको केही भाग देखियोस्। उसले मानिन। उसको नजिक पुगे। अनि उसको पेटमा हात राख्दै उसलाई थोरै झुकाए। उसको शरिरको तापक्रम बढेको थियो। उ केही अस्थिर देखिन्थी। मैले उसको वक्षस्थलको तस्विर लिन थाले।
उसलाई टेबलमा बस्न लगाए। अनि मिनिस्कर्ट माथी सर्दा देखिएका उसका साँप्राको तस्विरसंगै उसको रातो पेन्टीको केही झलक क्यामेरामा कैद गरे।
उसको नजिक पुगे, ‘टेक अफ योर अन्डरवेयर।’
‘नाईँ’, उसले लजाउँदै भनी।
उसको पछाडी उभिए। अनि हात उसको दाहिने साँप्रामा राखे। साँप्रामा हातको स्पर्शले उ केही झस्की, ‘सीSSSS”के भयो?’उसले केही बोलिन। हात माथी माथी पुर्याउँदै गए। अनि उसको पेन्टीको इलास्टिक समाति दुवै साइडबाट पेन्टी तल सारे। उसले मेरो हात च्याप्प समाति। म एक छिन रोकिए। उसले मेरो हात छोडी। अनि उसको पेन्टी पुरै फुकाले। पेन्टी सुँघे। यस्तो अलौकिक मन्त्रमुग्ध पार्ने बास्ना सायदै अन्त भेटिएला !
उसको शरिरमा अब एउटा पातलो समिज र छोटो मिनस्कर्ट थियो। अब मलाई उसको योनीको थौरै झलक पाउनु थियो। म क्यामेरा तर्फ बढे।’माधुरी, लिफ्ट ओर स्कर्ट’उसले स्कर्ट थोरै माथी सर्काइ। केही फोटो लिएपछि भने, ‘अझै’यो पटक उसले केही बढी नै माथी सारी। ‘पछाडी फर्क’उ पछाडी फर्किदाँ उसका प्वाँट परेका पुठाको तस्विर कैद भयो।’सेक्सी पोज दिएर स्कर्ट अझै माथी सारेर अगाडी फर्क त माधुरी।’उसले कुनै आनाकानी गरिन। यो पटक झण्डै योनी बाहेक तलका सबै क्षेत्र कैद हुन पुग्यो।उसले पनि ध्यान दिदै थिइ, आफ्ना गुप्ताङ्ग नदेखियोस् भनि।मेरो लिङ्ग अघि देखि ठन्किएर उत्तेजनाको चरम विन्दुमा थिए। तर माधुरीसंगको यो क्रिडा निकै रोमाञ्चक हुँदै थियो।म फेरी उसको छेउमा पुगे।उसको घाँटीमा हात पुर्याएर मुसारे। उसले उत्तेजित ढंगले जिउ सिरिङ्ग पारि। उसको समिजको दाहिने साइडको स्ट्राइप तल सार्दै उसको हातको कुहिनासम्म पुर्याए। फोटो खिच्न आएँ। उसको दाहिने स्तनको झण्डै आधा भाग देखिन्थ्यो। उसका साना तर पोटिला स्तनको आधा भाग मात्र पनि औधी कामुक लाग्ने। यो संगै उसले आफ्नो मिनिस्कर्ट उठाउँदै पोज दिदाँ त क्यामेरा छोडेर उसको जवानी चुस्न मनमा जोडले इच्छा उम्लेर आउँथ्यो। सम्हालिदै फेरी उ भएको ठाउँमा पुगे।’समिज खोल न, अनि युज योर ह्याण्ड, अन्डरस्ट्याण्ड ?’इन्टरनेट र मोडलिङको बारेमा थोरबहुत बुझेकी उसले मेरो कुराको अर्थ बुझि।’हेल्प मी।’, उसले लजाउँदै भनी।
म उसको पछाडी उभिए अनि समिज खोलिदिएँ। आहा! उसका ती नग्न ढाड, ढाडको बिचमा रहेको त्यो खाल्डो अनि सेतो चिल्लो छाला। उसको ढाडमा स्पर्श गरे। उ पटक पटक झसङ्ग हुन्थी। उसले दुवै हातले आफ्ना स्तन छोपि। म क्यामेरा तिर बढे अनि मिनिस्कर्ट मात्र रहेको उसको करिब करिब नाङ्गो शरिरको पोज पोजका तस्विर खिच्न थाले।
फोटो खिच्दा उसका राता गाला अझै राता हुँदै गएका थिए। उसलाई हाँस्न भन्थे, उसको मुस्कान निकै कामुक बन्दै थियो। उ आफै निकै उत्तेजित मोडमा आइपुगेकी थिइ।उसको नजिक पुगे, अगाडी उभिए । अनि उसलाई सोध्दै नसोधी हात उसको मिनिस्कर्ट तर्फ बढाए। उसका दुवै हात आफ्नो स्तनमा थिए। आफ्नै हातको स्पर्शले उ उत्तेजित थिइ, अनि केटाको अगाडी यसरी अर्धनग्न उभिदाँ उसको उत्तेजना बढ्यो थियो। उसको मिनिस्कर्ट कम्मरबाट तल झारे।
‘नो..’, उसको स्वरमा रुच्ने भाव थियो। लाग्थ्यो अब उ सहज नसक्ने भएकी छे। मैले उसको कुराको वेवास्ता गर्दै स्कर्ट भुँइमा झारिदिए। उसको योनीको वरिपरि आएका कैला रौं देख्नासाथ मेरो सासको गति बढ्न थाल्यो। उसको योनी टमक्क मिलेको अनि स्वच्छ थियो। उसको अगाडी झुके अनि खुट्टा उचालेर मिनिस्कर्ट निकालेर टेबुलमा राखे।
उ लाजले भुतुक्कै भइ।
‘सेक्सी!’ उसको कान टोक्दै भने। उसले छोपिराखेको हात स्तनबाट हटाइ। उ पुरै नग्न थिइ। उसका कलिला स्तनको खैरो निप्पल ठनक्क ठन्केको थियो। उसले हात छोड्ना साथ उसको स्तन मुसार। उसले आँखा चिम्म गरि। उसको निप्पल खेलाए।
‘ओ गड…..’, उसले लामो सुस्केरा हाली।
म क्यामेरा तिर लम्के। उसले आफ्ना नाङ्गो पोज दिन थाली। उसको स्तनको क्लोज अप लिए। उ ओठ टोक्थी अनि एक हातले स्तन समाथी। दुवै स्तन दुवै हातले समाउथी। एक हातले स्तन समाउथी, थोरै अगाडी झुक्थी अनि अर्को हातले योनी ढाक्थी। उसले सयौं तस्विर निकै समय लिएर खिच्दै गए। उ टेबुलमा बसी अनि खुट्टा फट्याएर क्यामेरा तर्फ पहिलो पटक आफ्नो रसाएको योनीको पुरै झलक देखाइ। उ घरी रौ खेलाउथी, घरी औला योनीमा पुर्याउथी अनि जिब्रो देखाउँथी, ओठ टोक्थी अनि आँखा झिम्काउँथी। निकै बेर उसको नग्न शरिरको तस्विर क्यामेरमा कैद गर्दा मेरो अन्डरवेयर पुरै भिजिसकेको थियो।
मैले क्यामेरा बन्द गरे। अनि माधुरी तिर लम्के।
‘तिम्री बुबु कति क्युट’
‘चुस्नु न’, उसले आंखा झिम्काइ। अब सायद उसंग पहिले झै लाज थिएन वा त्यो भन्दा पनि बढी उ निकै उत्तेजित थिए। उसको स्तनमा एकै पटकमा झम्टे। अनि चुस्न थाले। उ नग्न उभिएकी थिइ। उसको बेडमा पल्टाए। अनि चुडिने गरि उसका स्तन मुसार्न थाले।
‘ऐया, दुख्यो।’ तर संगै उ यसको मज्जा पनि लुट्दै थिइ। निकै बेर उसका कलिला स्तन मुसार्दै चुस्दै गरेपछि म उसको योनी तिर लम्के। उसको पुति छ्यापछ्याप्ती भिजेको थियो। पहिल भन्दा रातो भएको थियो। तर यति मुलायम थियो कि जिब्रो लगाउन साथ त्यसको बास्नाले बाघले बाख्रा झम्टेको जस्तो गरे।
उसको भर्जिन पुतिको रस चुस्न थाले। टिसीमा जिब्रोले खेलाए अनि जिब्रो भित्र छिराउन थाले। उ खाटमा छटपटिन थाली। टिसर्ट फुकाले, प्यान्ट फुकाले अनि अन्डरवेयर फुकालेर फणा फैलाएको लिङ्ग उसको अगाडी तेर्साए।
‘अबुई…कति ठूलो !”चुस।”भो।’ उसले इन्कार गरी।उसको टाउको नजिक पुगे अनि उत्तानो परेकी उसको मुखमा हुले।’हुन्न भनेपछि हुन्न’, उ यसै सन्कि।गालामा एक चड्कन हाने। उ रातो भइ अनि आसु झारी। 69 पोजिसनमा बसे। उसको योनी तर्फ मेरो मुख थियो भने उसको मुख भित्र मेरो लिङ्गहुल्न मिल्ने गरी उत्तानो परेकी उसको नग्न शरिरमाथी मेरो शरिरको पोजिसन मिलाए।उसको पुतिमा फेरी झम्टे। उ सुक्क सुक्क गर्दै थिइ। अनि जोडले उसकोमुखमा लामो घुसारे। उ त्यसो गर्न मानिरहेकी थिइन। तर निकै बल गरेर छिराए। केही छिनमा उसको पुति चाट्न छोडेर खाटमा उत्तानो परेर सुते।
‘मेरो चुस त अब!”नाइँ।’, उसले सोझै इन्कार गरी।गालामा अर्को चट्कन हाने।’खुरुक्क चुस ! चिक्ने’, यो पटक उ केही डराइ। तर भनेको नमानी घोप्टो परेर खाटमा सुती। जरुक्क उठे। उसको कपडा राखेको अर्को रुममा पुगे अनि उसको बेल्ट लिएर आए। घोप्टो परेर सुतिकी उसको पुठोमा जोडले हाने।
‘मम्मी….ऐया!”सक इट!”नो!’, उसको अडान अझै कायम थियो। यो पटक झन् जोडले पुठोमा बेल्टले ठटाएँ।’ऐया…. दुख्यो….ऐया…..मम्मी।”चुस्ने कि नचुस्ने्?”ओके ओके’। उ उत्तानो परी। म खाटमा ढल्किए। अनि उ मेरो लिङ्ग तर्फ घोप्टो परि। ८-९ इन्चको मोटो लिङ्ग उसले आफ्नो मुखमा छिराइ। उसको पछाडीको कपाल समाते अनि जोडले लिङ्गतर्फ उसको टाउको अचेटे। उसको घाँटीबाट भित्रैसम्म लिङ्ग छिर्यो। ‘क्वाँक क्वाँक’ गर्न थाली।
अर्को हातले जोडले उसको पुठोमा ठटाएँ। दुखाइले उसले मुखबाट निकाल्न खोजि। तर अर्को हातले टाउको अचेटेँ। निकै बेर उसको मुख भित्र लिङ्गले आफ्नो रौद्र रुपमा देखायो। केही बेरमा भएजति फुसी उसको मुख भित्र ओकल्यो। तातो फुसीले मुख भरिएपछि उसले लिङ्ग निकाल्न खोजी।मैले निकाल्न दिइन। उसले मन नलागि नलागि सबै निली अनि उसको टाउको समातिरहेको हात छोडिदिँए। उ खाटमा पल्टी। असिम आनन्दमा म थिए।
उ निकैबेर नबोलि नग्न अवस्थामै खाटमा पल्टिरहि। केहीबरे पछि बिस्तारै शिथिलता हट्यो। अनि फेरि उसलाई चुस्न भने। उ मनलागि नलागि उठी। शिथिल भएको लाडोलाई उसले मुखमा छिराउने प्रयास गरि। एकैछिनमा लिङ्ग फेरी पहिले जस्तै कडा भयो। उसलाई उत्तानो पारे, अनि त्यो कलिलो भर्जिन पुतिमा ८ इन्च लामो मोटो लिङ्ग छिराउन खोजे। उसको पुति भिजेर छ्यापछ्याप्ती थियो। जोड गरे। उ बुद्रुक्क उफ्रि। ‘ऐया….’
फेरि ट्राइ गरे। ‘दुख्यो…. ‘
अर्को सट हाने । ‘मम्मी….ऐया…मरे म… दुख्यो के।”चिक्ने चुप लागेर बस। चिकेरै छोड्ने हो। दुख्छ एक छिन सहेर बस।’अर्को सट हाने। साच्चै यतिको बल गर्दा त छिर्न पर्ने हो। उ रुन थाली।’मार्यो… मम्मी…. मलाई छोड्दिनु…. सक्दिन म… दुख्यो के, प्लिज।’अर्को सट मिलाएर ठोके। लुत्त छिर्यो। तर उ जोडले चिच्याइ। लाग्यो पुति त पुरै च्यातियो। सानो दुलोमा ठूलो छिराउन खोजेर होला, रगत पनि बग्न थाल्यो।’भो… गर्दिन…अब कहिल्यै गर्दिन…छोड्नु के, दुख्यो के…ऐया….हुँ…हुँ….ऐया….मम्मी, मम्मी।”चिक्ने मम्मीलाई बोलाएर केही हुन्न अब, चुप लाग, अब सकियो, अब दुख्दैन। पहिलो पटक भएर हो।’म उमाथी मच्चिन थाले। उ रुन थाली।उसको स्तनमा जोडले समाते अनि मुसारे।
‘क्वाँच क्वाँच…..”दुख्यो,….’केही बेरमा उ रुन छोडी। सायद अब आनन्द आउन थाल्यो। माधुरीको जवानी चिकेपछि उ निकै बेर त्यसरीनै खाटमासुतिरही। भोलीपल्ट देखि अब पुति चिकाउने उसको दिनचर्या बन्यो।
उ अहिले काठमाडौमा छे। हाम्रो नियमित भेट हुन्छ। उसका दुध अनि चाक प्वाँट भएका छन्। साच्चैकी माल भएकी छे। भेटेको बेला हामी चिकेरमात्र छुट्टिने गर्छौ।
Categories Nepali Sex Story, New Sex Story, Sex Stories, नेपाली यौन कथा, नेपाली सेक्स स्टोरी, यौन कथा Post navigation
हात तान्दा भाउजु मेरो काखमा लड्नु भयो, सुरु भयो चुम्बन
दुई प्रेमी जोडी
कंजूस पड़ोसी की बीवी की चूत चूदाई
दोस्त की मम्मी की चुदाई का मज़ा
गणित शिक्षक बने मेरे यौन शिक्षक
हाई प्रोफाइल लेडी की सेक्स कहानी- 3
जिम में आने वाली लड़की ने चुत दी
© 2022 Nepali Sex Tube • Built with GeneratePress
error: We Gotcha You !!!